Topnepalnews.com | माननीय डन हिरासतमा, कसरी बिताउदैछन समय, के लाग्छ मुद्धा विस्तृतमा
Posted on: January 24, 2020 | views: 414
पोखरा । अदालतबाछ पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको एक वर्षपछि बल्ल माननीयको हैसियत पाएका प्रदेशसभा सदस्य मनाङे अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । मनाङे प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यसमेत हुन् ।
संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २०५ ले सदस्यको पक्राउसम्बन्धी सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम २ ले बैठक नचलेको अवस्थामा सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना टाँस गर्ने र सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा बैठक १२ गतेलाई डाकिएको छ र अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई मनाङे पक्राउ परेको सूचना पनि दिएको छ । सभामुख अधिकारीले १२ गतेको सदनमा जानकारी गराइने बताए । “सदन चलिरहेकै छ, बैठक १२ गते छ, सोही दिन सदनमा जानकारी गराइनेछ, ” उनले भने ।
हिरासतमा मनाङे :
०७४ को मंसिर १० गतेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट विजयी बनेका मनाङे २०७५ माघ १४ गते बल्ल प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण गरेका थिए । माननीय बनेको झण्डै एक वर्षपछि फेरि उनी प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । अहिलेको उनको मुद्दा भने फरक छ ।
मुख्यमन्त्री कप उद्घाटनको क्रममा गएको मंगलबार उनले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापट प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि गुरुङले बुधबार दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा उनी बिहीबार पक्राउ परेका हुन् । बिहीबार नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समेत थियो । उनले मतदान गरेको केही समयपछि नै लेकसाइडस्थित होटल प्याराडाइजबाट प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिएकाे हो ।
कास्की हिरासतमा रहेका मनाङेलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइने कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले बताए । प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै मनाङेलाई छाडिने उनले जानकारी दिए ।
मनाङे पक्राउ परेलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनका आफन्तहरु सुत्ने कपडासहित पुगेका थिए । “यहाँ आएपछि सबै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ,” डीएसपी राजकुमार केसीले भने, “उहाँ सभासद भए पनि कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन् ।” उनले सभासद गुरुङसँग सामान्य सोधपुछ गरिएको र शुक्रबार म्याद थप हुनसक्ने बताए ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११८ को कसुरमा मनाङेलाई कारबाही माग गरिएको छ । उक्त व्यवास्था अनुसार दोषी ठहरिएमा १ वर्ष सम्म कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
“यो मुद्दा हेर्ने नै जिल्ला प्रशासनले हो” एसपी कार्कीले भने, “जिल्ला प्रशासनबाट पक्राउ आदेश लिएर अगाडि बढेकाले यो विषयवस्तु त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले दिउँसो साढे ३ बजे मात्र पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको थियो । पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको आधा घण्टाभित्र कास्की प्रहरीले दीपक मनाङेलाई पक्राउ गरेको हो ।
के भन्छन् मनाङे ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरिसकेपछि बाह्रखरीले मनाङेसँग कुराकानी गरेको थियो । उक्त क्रममा मनाङेले पक्राउ परे पनि केही फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पक्राउपछि उनले भने, “यस्तो विषयमा पहिले दुई पक्ष त बस्‍नुपर्‍यो नि । ठग्‍ने मान्छेले ठग्‍ने अनि उल्टै मुद्दा हाल्ने ? यो त बर्बाद भइहाल्यो नि । के फरक पर्छ र ? हामीले पनि मुद्दा हाल्छाैं ।“
उनले पक्राउ पूर्व दुई पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, “अब ‘ल अर्डर’ अलि राम्रो छैन नेपालमा । जसले जसलाई पनि मुद्दा हाल्न मिल्छ ? यस्तो खालको भएर मात्र हो नत्र, निवेदन नै हाल्न पाउँदैन के खासमा ।”
उनले एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई पनि ठगीको जाहेरी हालेर मुद्दा अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए । “चिनेजानेको केटा भनेर म मुद्दामा गइन” उनले भने, “हातले १/२ पटक झापड हान्नु सामान्य कुरा हो ।”
बुधबार आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर दीपक मनाङेले मिलनलाई झापड हान्नु नै उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
मिलनलाई पनि नछोड्‍ने : प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कुटपिट तथा पैसा नदिएकोभन्दै एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनीमाथि बुधबार पोखरा क्रियटिभ हाउसका सञ्चालक रामकृष्ण पौडेल र बिहीबार अन्य दुईजनाले उजुरी दिएका छन् । कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार केसीले उनीविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गरे ।
“हामीले उनीमाथि परेको उजुरीको पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ” उनले भने, “उनी पनि कानुनको दायरामा आउँछन् ।” विवादित छविका गुरुङविरुद्ध बाउन्स चेक दिएको, सांसदसँगै विवाद गरेका लगायतका घटना पनि यसअघि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।